Buy EMS Hip Muscle Trainer တင်​သားအလှ ပုံ​ဖော်​စက်​ in ရန်ကုန် (15,000 Ks) on ipivi
EMS Hip Muscle Trainer တင်​သားအလှ ပုံ​ဖော်​စက်​
နိုင်ငံတကာမှာပါ Best Seller ဖြစ်နေတဲ့ စက်လေးပါနော် 😊😊
⏩ကျစ်​ကျစ်​လစ်​လစ်​ တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ လှချင်​လား?
ကိတ်ချင်ရုံဖြင့် Electric Shake ပုံသွင်းစက်လေးကို နေ့စဉ်အသုံးပြုပေးရုံဖြင့် လအနည်းငယ်အတွင်း
လိုချင်တဲ့ ပုံစံထွက်လာစေမယ့် Electric Shakeစက်လေးပါရှင်... 🌝🌝
အိမ်​​ထောင်​ရှင်​များ၊ က​လေး​မွေးပြီး အလှပျက်​​နေသူများ၊ တင်​ပြားသူ တင်​မရှိသူ တင်​သား​လျှောကျသူများ
လှပ လုံးဝန်း ပင့်​တင်​​ပေး​စေပါတယ်​ 🌝🌝
အကိတ်​လွန်​ပြီး ပုံမကျသူများလည်း ကျစ်​လစ်​လှပ​စေပါတယ်​ရှင့်​ 🌝🌝
အဆီပိုနေတဲ့တင်ကြီးလွန်းနေသူတွေလဲ အဆီပိုတဲ့ဖယ်ချတဲ့ စနစ်ပါဝင်ပါတယ်ရှင်...🌝🌝
ဆေးလည်း မလူးချင် ဆေးလည်း မသောက်ချင်တဲ့စစ်လေးတို့အတွက် ဒီစက်လေးရှိရုံဖြင့် လှပတဲ့အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီနော်🌝🌝
Gym သွားဖို့ အချိန်မပေးနိုင်သူများနှင့်
အိမ်မှာပင် ဒီစက်လေးနဲ့ အဆီကျ ခန္ဓာလှအောင်
မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် အသုံးပြုပေးရုံပါဘဲရှင့် နေ့စဉ်ပုံမှန် အသုံးပြုရုံနှင့် ထမီဘဲဝတ်ဝတ် ဘောင်းဘီဘဲဝတ်ဝတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့် ရစေမှာပါရှင့် 🌝🌝
အဆီခြေဖျက်ပေးပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော စက်လေးပါ. 😃
အစာလဲမလို၊ဆေးလဲမလိုဘဲ၊အားကစား လုပ်စရာလဲ မလို Electric Shake တပ်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်
အသုံးပြုရုံဖြင့် လအနည်းငယ်အတွင်း လှပတဲ့ တင်သားတခု ပိုင်ဆိုင်စေမှာ အသေချာပါပဲနော် 🌝🌝
Side effect (လုံးဝ မရှိပါ)
မီးပလပ်​​ပေါက်​ ထိုးစရာမလိုဘဲ AAA 🔋🔋ဓာတ်​ခဲ အသေး၂ လုံး ထည့်​သုံးရတာဖြစ်​လို့ ခရီးသွား​ည်းအလွယ်တကူသယ်သွားလို့ရတယ်​​နော်​.. . 😃
လျှပ်​စစ်​ အန္တရာယ်​​ကြောက်​သူ​တွေ အတွက်​လဲ အရမ်း အဆင်​​ပြေပါတယ် 😃
အသုံးပြုပုံနှင့် စက်အလုပ်လုပ်ပုံ Video များကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်ပါတယ်​ရှင်....🌝🌝
09776080091(viber) ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတရ်ရှင် 😃😃
ရန်ကုန် မန်းလေး နှင့် နယ်မြို့ကြီးများ အိမ်အရောက် ငွေချေ ပို့ပေးပါတယ်ရှင့်
အမည်:EMS Hip Muscle Trainer တင်​သားအလှ ပုံ​ဖော်​စက်